Somaliland: Dawladda Ethiopia Oo Qorshaynaysa Isticmaalka Dekeddaha Sudan iyo Kenya - Wargane News
Home Business Somaliland: Dawladda Ethiopia Oo Qorshaynaysa Isticmaalka Dekeddaha Sudan iyo Kenya
Dawladda Ethiopia ayaa ku hawlan isticmaalka Dekedda Port Sudan ee ku taala dalka Sudan, Sida lagu sheegay Warbixin uu baahiyay Wargeyska Sudan Tribune oo fadhigiisu yahay Sudan. Dawladda Ethiopia ayaa shaacisay inay Baddeecooyin gaadhaya ilaa 50 Kun oo tan kala soo degi doonto Dekedda Port Sudan.
Xogaha wargeysku baahiyay waxay intaasi ku dareen haatan Shirkad Chiness ahi dhisayso jid tareen oo isku xidha Sudan iyo Ethiopia kaasi oo sahlaya isku socodka labada dal iyo soo dejinta Alaabooyinka. Wargeysku waxa uu sheegay in Ethiopia qorshaynayso inay yarayso ku tiirsanaanteeda Dekedda Jabuuti oo ay haatan kala soo degto alaabooyinka 90%.
Arrintan ayaa imanaysa iyadoo Somaliland iyo Ethiopia oo xidhiidh dhaw leh ay u socdeen wada hadalo ku saabsan iskaashiga dhanka dhaqaalaha iyo adeegsiga Dekedda Berbera. Waxaa sidoo kale socday sidii loo dhisi lahaa Jid adag oo isku xidha Somaliland iyo Ethiopia si ay u sahlanaato isu socodka Xamuulka labada dal, waxaana jidkaasi fulintiisa ballan qaaday midawga Yurub.
Dhanka kalena Ethiopia waxay ku hawlan tahay adeegsiga Dekeddaha dalka Kenya siiba Dekedda Lamu,iyadoo haatan ku hawlan dhismaha jid isku xidha xuduudka Kenya iyo Magaalada Addis-ababa.
Wali ma cadda sababta Ethiopia ugu dhiiran ladahay dardar galinta adeegsiga Dekedda Berbera oo u baahan balaadhin,hase ahaatee xoggaha wargeyskani baahiyay ayaa tilmaamay inay jiraan cabsi dhanka Budhcad baddeeda ah oo Ethiopia qabto,balse Baddaha Somaliland ayaa ah kuwo ka fayow Budhcad badeeda.